Maxay yihiin kiniinnada ugu fiican? Moodooyinkan ma khaldami doontid | Ragga Stylish
Qolka Ignatius | | Tiknoolaji
Markii ay Apple soo saartay Ipad-ka, inbadan waxay ahaayeen falanqeeyayaasha xaqiijinaya in da'da PC-ga, sidii aan ku ogayn illaa iyo hadda, ay dhammaatay. Soo-saareyaashu waxay arkeen sida sannadba sanadka ka dambeeya, iibinta laptop-ka ayaa hoos u dhacay si ay uga faa'iideystaan ​​kiniiniyada, aalad ina siinaysa kala duwanaansho ka weyn laptop-yada oo daboolaya inta badan baahiyaha isticmaalayaasha.
Sanadihii la soo dhaafay, kiniiniyada ayaa isu beddelay inay noqdaan beddel dhab ah oo ku saabsan isticmaalka ay isticmaaleyaal badani ka sameyn karaan kombuyuutar. Intaa waxaa dheer, mahadnaqayaasha horumarinta, maanta waxaan ka heli karnaa codsiyo noocyo kala duwan ah oo buuxiya baahiyaha dhammaanba adeegsadayaasha. Halkan waxaan ku tusaynaa waxa ay yihiin las kiniiniyada ugu fiican in aan hadda ka heli karno suuqa.
Hadaad u maleyneyso waqti aad ku cusboonaysiiso laptop-kaaga hore, waxaa laga yaabaa inaad ujeedo ka leedahay inaad mar uun u wada gudubto, u adeegsiga iyo raaxada ay kiniin noo soo bandhigto. Waqtigan xaadirka ah, suuqa waxaan ka heli karnaa laba soo-saare oo sii wadaya inay ku sharadadaan suuqan: Samsung iyo Apple. In kasta oo, si aan runta u sheegno, ma ilaabi karno Microsoft iyo Surface, oo ah iskudhaf u dhexeeya kaniiniga iyo laptop-ka
1 Kiniiniyada Apple
1.1 12,9-inji iPad Pro
1.2 10,5-inji iPad Pro
1.3 9,7 inji oo iPad ah
2 Kiniiniyada Samsung
2.3 Galaxy Buugga
3 Kiniiniyada Microsoft
Apple waxay na siineysaa seddex nooc oo kiniin ah oo leh cabbir shaashado kala duwan: 12.9, 10.5 iyo 9.7 inji. In kasta oo ay run tahay inay iyaduna na siiso nooc 7,9-inji ah, moodeelkani wuxuu ku dhow yahay inuu ka baxo buugga maaddaama aan la cusbooneysiin dhowr sano. Labada hore, 12,9 iyo 10.1 inji, waxay ku jiraan qaybta Apple's Pro, iyagoo ah aalado na siiya awood aad ugu eg waxa aan hadda ka heli karno in badan oo kambuyuutarrada gacanta ee haatan laga helo suuqa.
Moodooyinka Pro sidoo kale waa la jaan qaadi karaan qalinka Apple, Qalab qaali ah oo aan wax ku qori karno ama si toos ah ugu sawiri karno shaashadda qalabka, laakiin u noqon kara aalad ku habboon dhammaan kuwa adeegsada laptop-ka inay qaataan sharraxaad, maadaama ay ku dhex jiri karto xarun waxbarasho, Jaamacadda ...
Nidaamka deegaanka ee codsiyada Apple aad buu u ballaadhan yahay oo App Store-ka ayaan ka heli karnaa codsiyada dhammaan noocyada kala duwan si aad u qabato hawl kasta oo maskaxdaada ku soo dhacda, laga bilaabo sameynta naqshadeynta qalinka Apple sida haddii aan si toos ah ugu sameyneyno Photoshop, illaa abuurista dukumiintiyada qoraalka, xaashiyaha ama bandhigyada iyadoo la adeegsanayo kumbuyuutar dibedda ah oo aan dhibaato lahayn.
12,9-inji iPad Pro
Qaabka 12,9-inji waa tusaalaha ugu habboon dhammaan naqshadayaashaas, oo u baahan shaashad ballaaran abuur ama wax ka bedel naqshadaha iyadoo gacan ka heleysa Qalinka Appel. Moodelkan waxaa lagu heli karaa isku xirka Wi-Fi ama Wi-Fi iyo isku xirka xogta. Intaa waxaa dheer, waxaa lagu heli karaa laba awood oo kaydinta ah: 64 iyo 256 GB. 12,9-inji iPad Pro ah oo leh 64GB awood waxaa lagu qiimeeyaa Amazon at 750 euros
Qaabka 10,5-inji waxaa loogu talagalay dadka isticmaala Waxay u baahan yihiin awoodda nooca 12,9-inji ah uu na siinayo, laakiin leh kala duwanaansho ay bixiso cabbir yar oo shaashad ah, oo sidaas darteed, aad loo cabbi karo. Moodelkan, sida midka 12.9-inji, waxaa lagu heli karaa noocyo 64 iyo 256 GB ah iyo xiriir Wi-Fi ama Wi-Fi oo lagu daray xog. Qiimaha 10,5-inch iPad Pro oo leh awood 64 GB waa 679 euro at Amazon
9,7 inji oo iPad ah
Laakiin haddii waxa aad rabto uu yahay kiniin la qaadan karo iyo ma rabto inaad lacag badan ku bixiso, maadaama isticmaalka aad sameyn doontid ay tahay inaad eegto boostada, arag darbigaaga Facebook, koontadaada Twitter ama Instagram, marka lagu daro aqrinta balooggan iyo kuwa kale ee aad jeceshahay, Apple waxay na siisaa nooca 9,7-inji ah, oo ah nooca ugu yar awooda 32 GB oo laga heli karo labada nooc ee Wifi iyo kan Wifi oo lagu daray xogta.
Qaabkani kuma habboon yahay qalinka Apple. IPhone 2018GB wuxuu leeyahay 32 Wax alaab ah lama helin.intii aad ku jirtay Apple Store waxaan ku heli karnaa 349 euro.
Sannadihii ugu horreeyay ee ay ku jirtay suuqa kiniinka, Samsung marwalba waxay ku tiirsanayd oo keliya Android si ay u maamusho. Laakiin markii sanadihii la soo dhaafay, oo Windows 10 uu noqday nidaam hawlgal oo kombuyuutarrada gacanta lagu qaato, shirkadda Kuuriya waxay billowday moodallo nidaamkan hawlgalka ah, oo ah nidaam hawlgal waxay na siisaa isla faa'iidooyinka in aan hadda bixino kombuyuutarro gacanta lagu qaato oo cimrigoodu dhan yahay.
Haddii aad rabto inaad kuhesho kiniin, Samsung's Tab S range waa waxa aad raadineyso. Noocani Samsung wuxuu na siinayaa laba nooc oo shaashad ah: 8 iyo 9,7 inji. Maxaa intaa ka badan, Noocyada Tab S3 waxay la yimaadaan stylus, kaas oo aan ku qaadan karno ogeysiis ama ku abuuri karno sawirro cajiib ah kiniinkeenna Samsung, sida iPad Pro, in kasta oo ay tahay inaan si madax bannaan u iibsanno Qalinka Apple.
Samsung Galaxy Tab S3 oo leh LTE
Haddii aadan rabin inaad lacag badan ku bixiso kiniin Samsung oo ay maamusho Android, waxay na siisaa moodooyin kala duwan si aan u daboosho dhammaan baahiyaha ku jira xadka Tab A. Xaddigaani wuxuu na siinayaa laba shaashad oo shaashadda ah: 9.7 iyo 10.1 inji, in kabadan oo ku filan si loo daboolo baahiyo marmar ama mid joogto ah oo gurigeenna ka jira.
Noocyadii ugu horreeyay ee taxanahan waxay na siiyeen moodeello 7-inji ah, in kasta oo ay maanta weli diyaar u yihiin iibinta qiimo aad u xiiso badan, laguma taliyo haba yaraatee, labadaba faa'iidooyinka iyo nooca Android ee aan ka helno gudaha.
Samsung Galaxy Tab A 10.1 inji
Samsung Galaxy Tab A 9,7 inji
Haddii fikradda ah in la qaato kiniin gacmo furan maskaxdaada ku soo dhacaya, Samsung Galaxy Book wuxuu noqon karaa waxaad raadineysay. Galaxy Book waa kiniin / la beddeli karo kaas oo aan ku dari karno kiiboodh na siiya ismaamul ilaa 11 saacadood ah. Si ka duwan tabta, gudaha waxaan ka heli Windows 10, markaa waxay ka badan tahay laptop-ka bilaa kumbuyuutar kumbuyuutar.
Gudaha waxaan ka helnaa jiil toddobaad Intel processor i5 oo ay weheliyaan 4/8/12 GB oo RAM ah, shaashaddu waa Super AMOLED waxayna ka timaadaa guriga oo leh S Pen, kaas oo aan kula falgaleyno shaashadda sidii oo ay tahay Galaxy Note. Xaga kaydinta, Galaxy Book waxaa lagu heli karaa 64/128 iyo 256 GB nooc.
In lagu maamulo Windows 10 waan awoodnaa rakibi codsi kasta in aan u baahanahay in aan isticmaalno, liddi ku ah waxa ku dhaca kiniiniyada ay maamulaan labada macruufka iyo Android. Iyada oo leh miisaan kaladuwan, oo kuxiran nooca, laga bilaabo 650 garaam illaa 754 garaam iyo shaashad 10,6 / 12-inji ah, u-adeegsiga kaniinigan / beddelka ayaa la hubinayaa.
Haddii aynaan gebi ahaanba ka takhalusi karin laptop-ka sababo la xiriira astaamaha ama codsiyada ay na siiso ee aan ka heli karno labada macruufka iyo Android-ka, beddelka ugu fiican ee aan hadda ka heli karno suuqa waa Microsoft Surface, kiniin aan awoodo u beddel laptop-ka si dhakhso leh adoo ku xiraya kumbuyuutar dibedda ah.
Haddii aan raadineyno ikhtiyaar ka jaban Samsung Galaxy Book, shirkadda Microsoft waxay na siisaa noocyo badan oo kiniinno ah / laptops ah oo aan lahayn kumbuyuutar ku dhex yaal aagga dusha sare. Qalabkani waa oo ay maamusho nooc buuxa oo ah Windows 10, taas oo noo ogolaaneysa inaan rakibno codsi kasta. Intaa waxaa dheer, waxaa ku jira ikhtiyaari ah in la kiciyo habka kiniinka, taas oo noo oggolaaneysa inaan la falgalno sida haddii ay tahay kiniin.
Surface Pro, ayaa na siisa moodooyin kala duwan si loo daboolo dhammaan baahiyaha dhaqdhaqaaqa iyo Awoodda kuwa ugu baahida badan ay u baahan karaan, gaar ahaan marka madaxeena uusan soo marin qaadashada nidaamka deegaanka ee guurkeena si aan ugu fulino hawlo goos goos ah ama maalinle ah. Si ka duwan Samsung, oo na siisa hal nooc oo ah Buugga Buugga, Microsoft waxay na siisaa 5 nooc oo kala duwan, dhammaantoodna waxay leeyihiin shaashad 12,3-inji ah iyo ismaamul ka badan 12 saacadood.
Dusha Pro m3 - 128 B SSD + 4 GB oo RAM ah oo ah 949 euro
Dusha Pro i5 - 128 B SSD + 4 GB oo RAM ah oo ah 919 euro
Dusha Pro i5 - 128 B SSD + 8 GB oo RAM ah oo ah 1.149 euro
Dusha Pro i5 - 256 B SSD + 8 GB oo RAM ah oo ah 1.499 euro
Dusha Pro i7 - 128 B SSD + 8 GB oo RAM ah oo ah 1.799 euro
Kuwani waa qiimaha rasmiga ah ee barnaamijka 'Surface Pro' ee bogga internetka ee Microsoft.
Markaad iibsanayso kiniin, ugu horreyntii waa inaan tixgelinno, marka laga reebo miisaaniyadda, labadaba isticmaalka aan dooneyno inaan ku siino iyo nidaamka qalliinka ee taleefannada casriga ahi adeegsato. Haddii aan haysanno iPhone, sharadka ugu cad wuxuu noqon lahaa inaad tagto iPad. Laakiin haddii aan haysanno casriga casriga ah ee 'Android', ikhtiyaarka Samsung ayaa ah midka ugu habboon.
Haddii aan dooneyno kiniin kaas oo sidoo kale noo oggolaanaya inaan adeegsanno codsiyo gaar ah oo aan laga heli karin nidaamyada hawlgallada moobiilka ee iOS iyo Android, waxaan haysannaa laba ikhtiyaar. Raadi bedel kale labada OS ama hel Samsung ama Microsoft kiniin ay maamusho Windows 10.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » nololeedka » Tiknoolaji » Maxay yihiin kiniinnada ugu fiican?
Sida looga saaro xargaha kabaha